Nhau - Kushanya Kwevatengi veCongo Kwekuzadza Mashini
Munguva yeiyo 2nd China International Expo Expo munaNovember, 2019 vamiriri veAfrica vanosvika kuShanghai vachibva kuCongo, South Africa. Varidzi vakashanyira uye vakatarisa michina yavanoda, fekitori yedu ndiyo kiyi yekuzadza muchina wekupa muchirongwa chavo.
Isu, Higee Machinery, inogadzira yakavakirwa mutengesi, ine ruzivo rwemakore angangoita makumi maviri mumunda wekuzadza, kutora, kunyora uye kurongedza muchina mutsara wemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa. Isu tiri nyanzvi yekumira yekuzadza mutsara mhinduro mupi. Mune rwendo rwavo rwebhizinesi, mutengi wedu akabvunza mvura pre-kurapwa system, kusanganisira quartz jecha firita, inoshanda-kabhoni firita, Ro system, Ozone sterilizer, tangi remvura. Uye ivo zvakare vakaedza kumhanya kweedu matatu muna 1 monoblock cola rinsing, filling and capping machine line. Pekupedzisira tine musangano wezvekutengesa-shure, zuva rekutumira, nguva yekubhadhara uye musika nezvekutengesa mutsara wemabhodhoro emvura muAfrica.
Pane chidimbu cheNhau kubva kuAfrican delegation kuCongo iyo hurumende inorambidza mugadziri mumusika wemuno kugadzira sachet mvura.
Sachet yekuzadza mvura uye kurongedza muchina chigadzirwa chinopisa mune imwe nzvimbo ye Africa izvozvi Asi ivo vanofanirwa kufunga nezve kutanga mutsva wemabhodhoro emvura yekugadzira mutsara mune ramangwana.
Vamiriri vemuAfrica vakawana muchina wakakodzera, vanakirwa nechikafu cheChinese, vakatarisa kuyedzwa kwemuchina. Ivo vanopa kurumbidza kwakakwirira kune yedu yakanaka yekumisikidza uye 5S yekugadzirisa ruzivo panguva yavanoshanyira musangano wedu, imba yemusangano, dhipatimendi rekugadzira, imba yekuchengetera uye maneja saiti. Isu tiri zvakare kudada nehunhu hwedu hwekugadzira uye tinokoshesa kubatana pamwe. Higee Machinery, yako yakanaka sarudzo yemarudzi ese echinwiwa, chinwiwa uye mvura yekuzadza kukodha, kunyora uye kurongedza mutsetse. Welcome to Kutishanyira! Isu tinogara tiri pano takakumirirai!
Post nguva: Dec-18-2019